ရေခဲပြင်ပေါ်အံ့ဖွယ်: အမေရိကန်အိုလံပစ်ဟော်ကီရဲ့ပုံစံလုပ်ရန် Moment
by ဂျေမီ Fitzpatrick
ဘယ်လို 1980 ခုနှစ်အမေရိကန်အိုလံပစ်ဟော်ကီအသင်း၎င်း၏ "ရေခဲပြင်ပေါ်အံ့ဖွယ်အ" Created
တူသောကိန်းဂဏန်းများဝါကြွားသောအားကစားယဉ်ကျေးမှု သူငယ်ရုသသည် နှင့် ယေရှဲ Owen , နှင့်ကီးနှင့်ဝံကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများ, ကကောလိပ်ကျောင်းဟော်ကီကစားသမားတစ်ဦးအဖွဲ့သည်တစ်ဦးတည်မြဲစှဲစေမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
အမေရိကန်ကောလိပ်ဟော်ကီတစ်ဦးက New အဆင့်ရောက်ရှိ
1999 အနီးကပ်မှဆွဲငင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အများဆုံးစစ်တမ်းများ 20 ရာစု၏ "အံ့ဖွယ်အရေခဲပြင်ပေါ်တွင်" အမေရိကားရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအားကစားအောင်မြင်မှုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်အားဖြင့် immortalized ခဲ့ပါတယ် " အံ့ဖွယ် ။ "
"ဒါဟာကိုယ့်အတွက်အမေရိကန်အားကစားသမိုင်းအပေါငျးတို့သအတွက်တစ်ခုတည်းအများဆုံး indelible ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်" ဟု 1980 ခုနှစ်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာ run ရေးအဖွဲ့က USA ရဲ့မဖြစ်နိုင်သောရွှေတံဆိပ်၏အားကစားပုံကဆိုသည်။ "တစ်ဦးစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းသို့အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုစေလွှတ်တော်မူသောတစ်ခုမှာ။ " အမေရိကန်ဟော်ကီလုလင်အမေရိကန်များအနေဖြင့်အားကြီးသောနီစက်ချယူတဲ့အခါမှာဖေဖော်ဝါရီလ 22, 1980 ခုနှစ်, အပေါ်အသက် လာ. , ရုရှားနိုင်ငံ ။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကို Herb Brooks, နိုင်ငံတကာဟော်ကီ၏ NCAA နည်းပြနှင့်ကျောင်းသားနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ Brooks နှစ်ခုမှာမိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကစားခဲ့ အိုလံပစ်, နှင့်ဟော်ကီထဲမှာအမေရိက၏ပထမဦးဆုံးအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ကိုပေးသော 1960 အဖွဲ့ကနေဖြတ်ကနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ သူကသုံး NCAA ခေါင်းစဉ်မှအဖွဲ့ဦးဆောင်နှင့်သူ၏မိတ်ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်ဘို့အသိပေးစာဝင်ငွေ, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်ခေါင်းကိုနည်းပြအဖြစ် 1970 နေခဲ့ရသည်။
ဆိုဗီယက်, အနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 1970 ခုနှစ်အတော်ကြာအဓိကရြှုံးကနေပေါ်ထွက်လာသည်ဟော်ကီကမ္ဘာကြီးရေကန် Placid မှာ 1980 ခုနှစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသို့သွား၏ထိပ်ပေါ်မှာပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခင်နှစ်ကအမျိုးသားအသင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်စီးရီး၏ဆုံးဖြတ်ခြင်းဂိမ်းထဲမှာအကြောင်း NHL အားလုံးကြယ် 6-0 နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေသည်။ 1979 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲများ၏ဆိုဗီယက်လွှမ်းမိုးမှုကိုအကြွင်းမဲ့အာဏာဖြစ်ခဲ့သည်။ Sergei Makarov နှင့်ဗလာဒီမာ Krutov တူသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နုပျိုကစားသမားသစ်တစ်ခု, ကွောအစွန်းယူဆောင်စဉ်စစ်ပြန်-Boris Mikhailov, Valery Kharlamov အလက်ဇန္ဒား Maltsev, ဗလာဒီမာ, အထွတ်အထိပ် form မှာနေတုန်းပဲရော့-ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ကိုနောက်ကွယ်မှ, အစဉ်မပြတ်သကဲ့သို့, အကြီးအ Vladislav Tretiak ကျော့ကွင်း၌ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာရွှေ Won ဒါက Luck မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်
ကောလိပ်ကျောင်းပွတ်တိုက်တစည်းကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးခုတ်လှဲသောရင်ခုန်စရာအယူအဆ ရေခဲဟော်ကီ သက်သက်ခူးနှင့်ပြဌာန်းခွင့်မှတဆင့်အသင်းလှဲမှားသောဖြစ်ပါတယ်။ Brooks အဖွဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတစ်နှစ်-and တစ်နှစ်ခွဲနေခဲ့ရသည်။ သူရာပေါင်းများစွာအလားအလာကနေတန်းစီဇယားကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ထည့်သွင်းထားတဲ့မြောက်မြားစွာ tryout စခန်းများ, ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ပြီးတော့ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတစ်လွှားပြပွဲဂိမ်းတစ်ခုကြိတ်အချိန်ဇယားကစားခြင်းလေးလနေခဲ့ရသည်။ အဆိုပါကစားသမားအထင်ကြီးအကြောင်း NHL အလုပ်အကိုင်များကိုမှသွားမညျ့သူ Neal Broten, Dave ခရစ်ယာန်, မာကုဂျွန်ဆင်, ကဲန်နက်ဖြန်နှင့်သူ Mike ရမ်းဆေး, ပါဝင်သည်။
အဘယ်သူမျှမကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ဥရောပကိုက်ညီရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ Brooks အမြန်နှုန်း, အေးစက်နှင့်စည်းကမ်းကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ကံအတိုပြိုင်ပွဲအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍဘယ်လို သိ. သူက၎င်း၏လမ်းသို့ရောက်လာသောသမျှအခွင့်အလမ်းများကိုရယူနိုင်ကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေချင်တယ်။ ဒေသတွင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုဘယ်သူကိုအများစုမင်နီဆိုတာသို့မဟုတ်မက်ဆာချူးဆက်ကနေချီးကျူးလိုက်ပါတယ်, ကစားသမားတို့တွင်အမြင့်မားတဲ့ပွေးလေ၏။ Brooks မကြာခဏကိုယ်တော်တိုင်ဆန့်ကျင်, သူတို့ကိုစည်းလုံးဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကသူတို့လုပ်ငန်းတာဝန်ထိုက်, လုံလောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့, လုံလောက်အောင်ကောင်းသောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိမေးမြန်း, နှုတ်ဖြင့်လည်းကိုယ်ထိလက်ရောက်သူတို့ကိုစိန်ခေါ်ပေမယ့်။ အနည်းငယ်ထိပ်တိုက်ပွဲအော်ဟစ်အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
"သူတိုင်းအခွင့်အလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှင့်အတူ messed" ရမ်းဆေးကပြောပါတယ်။
"Herb ယနေ့ငါ့အိမျသို့ကြွတော်မူလျှင်, နေတုန်းပဲမသက်မသာဖြစ်လိမ့်မယ်," ကပ္ပတိန်က Mike Eruzione နှစ်ကြာပြီးနောက်ကဆက်ပြောသည်။
Brooks '' နည်းဗျူဟာရွေ့လျားကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ မကြာမီတွင်အိုလံပစ်မှီ, အပြာလိုင်းပေါ်မှာပိုပြီးရွေ့လျားဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, သူကာကွယ်ရေးမှနေ့မှ စ. ပြောင်းလဲ Dave ခရစ်ယာန်ဟုမေး၏။ Broten, ဂျွန်ဆင်, မာကု Pavelich - - မည်သူမဆိုနှင့်အတူစကိတ်စီးနိုင်မြန်နှုန်းသည်မိမိရှာပုံတော်စင်တာများတစ်သုံးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သူကအတိအကျလက်ျာအချိန်တွင်အထွတ်အထိပ်မှ goaltender ဂျင်မ် Craig ရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားအရှုံးသမားခဲ့ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ Brooks ကြေးဝါတံဆိပ်လက်လှမ်းမမီအတွင်းခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါဆိုဗီယက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ Pre-အိုလံပစ်ပြပွဲဂိမ်းရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကျယ်ပြန့်မျက်လုံးများနှင့်အမေရိကန်များ 10-3 manhandled ခဲ့ကြသည်။
Brooks သည်သူ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်လည်းရှေးရိုးစွဲခဲ့သညျကား, မိမိကိုယျကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။
ရေကန် Placid မှာအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆွီဒင်ဆန့်ကျင်အစမ်းသဘောစတင်စတင်ခဲ့ပေမယ့်ဘီလ် Baker ကနောက်ဆုံးမိနစ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု 2-2 လည်စည်း salvaged ။ အဲဒီနေ့ကကျော်တစ်ဦးက 7-3 အနိုင်ရရှိယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်။ အရှိန်အဟုန်နော်ဝေနှင့်ရိုမေးနီးယားနှင့်ဂျာမနီကိုအုပ်စိုး 4-2 တစ်ကျော့ပြန်အနိုင်ရရှိဆန့်ကျင်အောင်ပွဲနှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။
သူတို့တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအနိုင်ရနှောင်းပိုင်းတွင်တဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကမတိုင်မီဖင်လန်နှင့်ကနေဒါဆန့်ကျင်နောက်ကွယ်မှကျဆင်းသွားပေမယ့်ဆိုဗီယက်, သင်တန်း, သူတို့ရဲ့အုပ်စု undefeated သွားလေ၏။ ထိုသို့သောလဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတှကျအနညျးငယျအကြောင်းမရှိထင်ရှား။ , အဆိုပါအုပ်စုတွင်ရပ်တည်မှုအမေရိကန်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည့်မြင်ကွင်းကို set up: အတံဆိပ်ပတ်ပတ်လည်မှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြိုင်ဘက်ဆိုဗီယက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အများဆုံးစာမျက်နှာ Eruzione နှင့်ဂျွန်ဆင်၏အမှတ်ပေးသူရဲကောင်းအာရုံစိုက်နေစဉ်, အမေရိကန်အောင်ပွဲ Craig မပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှပါပြီမဟုတ်ပေ။ ဆိုဗီယက်ထွက်-ရိုက်ကူးကျယ်ပြန့် margin ကအမေရိကန်တွေ, ပျံထွက်လာ၏။ အဆိုပါဂိုးသမားကဆင်း 2-1 အနီးကပ်မှဆွဲငင်ပထမဦးဆုံးကာလအဖြစ်, ဂိမ်းအတွက်သူ့အဖွဲ့ကိုစောင့်ရှောက်။ မိမိအအသင်းဖော်, ပြပွဲဂိမ်းထဲမှာထက်ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ခဲ့ကြသည် forechecking ခက်။ ဆိုဗီယက်ကသူတို့ဦးဆောင်မှဆက်ပြောသည်မတိုင်မီဒါပေမယ့်အချိန်သာကိစ္စသလိုပဲ။
အဆိုပါချမှတ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဆိုး၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာကိုပထမဦးဆုံးကာလရဲ့အဆုံးမှာရောက်လေ၏။ အချိန်ထွက်အပြေးနှင့်အတူ, Dave ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရှည်လျားသောရိုက်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ Tretiak အလွယ်တကူကြောင့်ရပ်တန့်ကားပြန်တက်ထွက်ကန်။ ဆိုဗီယက် defensemen, အဉသြသံကိုမျှော်လင့်, ပြဇာတ်ပေါ်တက်စေသလိုပဲ။ Johnson ကသူတို့ကိုအကြားပျက်ကျခြင်းနှင့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
အရာရှိများဂျွန်ဆင်ရဲ့ရိုက်ချက်ဟာဉသြသံရိုက်နှက်ခဲ့ရှိမရှိဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ဆိုဗီယက်တို့သည်ကြားပြတ်ချိန်အဘို့မိမိတို့ Locker အခန်းသို့သွားကြ၏။
ပန်းတိုင်အတည်ပြုခဲ့သည်ခံခဲ့ရပြီးတာနဲ့သူတို့နောက်ဆုံးစက္ကန့်ပယ်သွား tick တစ် faceoff ပြန်ဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ Tretiak မပါဘဲပြန်လေ၏။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး goaltender backup လုပ်ထားဗလာဒီမာ Myshkin ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သညျ။
အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသား 20 မိနစ်ဆိုဗီယက်တိုက်ခိုက်ရေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်အပင်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်ကွာလာခဲ့ရသည်။ သူတို့ကအစပိုက်ကွန်ထဲကဒဏ္ဍာရီ လိုက်. ခဲ့သည်။ သူတို့အကြောင်း NHL အသင်းဖော်သောအခါနည်းပြဗစ်တာ Tikhonov Tretiak အတွက်ဒါနည်းနည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြသခဲ့သောအဘယ်ကြောင့်နှစ်ကြာပြီးနောက်, ဂျွန်ဆင်ဆိုဗီယက် defenseman Slava Fetisov မေးတယ်။ "နည်းပြအရူး" Fetisov ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
"ငါဂိမ်းအတွက်အစားထိုးခဲ့သင့်တယ်ထင်ကြဘူး," Tretiak ကသူ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိထဲမှာရေးသားခဲ့၏။ "ငါသည်ပြီးသားဤမျှလောက်များစွာသောအမှားတွေလုပ်ခဲ့ကျွန်မကစားမှသာတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ (Myshkin) အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကရုန်းကန်ဘို့ပြင်ဆင်မခံခဲ့ရ, သူအမေရိကန်များမှ '' များတွင်ဖမ်းယူနားဆင် '' မခံခဲ့ရပါဘူး။ "Tikhonov နောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းအလဲဂိမ်းမှာဆိုဗီယက်အရာရှိများအနေဖြင့်ဖိအားများအောက်တွင်ခဲ့အကြံပြုသည်။
ဆိုဗီယက် regrouped, ဒုတိယကာလအတွင်း ပို. ပင်လွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်။ အလက်ဇန်းဒါး Maltsev တစ်ခွဲထွက်အပေါ်သွင်းယူမတိုင်မီ Craig တိုက်ခိုက်သူတွေ၏လှိုင်းတံပိုးကိုပယ် fended နေစဉ်အမေရိကန်များ, ရည်မှန်းချက်အပေါ်ရုံနှစျခုရိုက်ချက်များနိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်နှစ်ခုကာလများအတွက်ကစားသယ်ဆောင်တော်မူပြီးမှ, ထိုသို့ပြသနိုင်ဖို့တစ်ခုသာ 3-2 ခဲခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမိနစ် 20 ခုနှစ်, Brooks မဟာဗျူဟာ၏မှတ်တိုင် - မြန်နှုန်း - ထိုရှေ့မှောက်သို့ရောက်ကြ၏။ Tikhonov, Kharlamov နှင့် Mikhailov တူသောစစ်ပြန်အပေါ်အကြီးအကျယ်အမေရိကန်တွေကိုဖမ်းနိုင်ကစားသမားအားကိုး။ "Dave ပိုးသူတစ်ဦး Krutov, အမေရိကန်တွေအရှိဆုံး, ဒါမှမဟုတ် Makarov ကိုကွောကျရှံ့ကစားသမား၏ဖြစ်မဟုတ်ဘူးကိုမွငျလြှငျမကျြနှာကိုမျှော်လင့်ခြင်း, faceoff စက်ဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရှာဖွေနေအောက်မေ့," လောရင့်မာတင်နီစက်များတွင်ရေးသားခဲ့သည်။
"တတိယကာလ၌, မိမိအလိုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးသနားခံရခဲ့သည်။ သူ Mikhailov နှင့်ပိုးသူ့ကိုအတိတ်စကိတ်စီးနိုင်သိဝါရင့်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားအိမ်မှာနေတဲ့ဆိုဗီယက် defenseman အားဖြင့် fumbled တစ်ချောင် puck ပစ်ခတ်ပင်ပါဝါကစားရည်မှန်းချက်, ဂျွန်ဆင်အပေါ်ဆွဲ။ Vasily Pervukin ရဲ့ရှင်းလင်းခြင်း pass Pavelich အားဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်: နောက်ထပ်ခံစစ်အမှားသမိုင်း-အောင်ယခုအချိန်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Eruzione မြင့် slot ကသို့စကိတ်စီးနှင့်ပြ Myshkin အတိတ် 25 ခြေလျင်လက်ကောက်ဝတ်ရိုက်ချက်ပစ်, ကတက် scooped ။ ယူအက်စ်အေ4- ရုရှားနိုင်ငံ3။
အောင်ပွဲခံဖို့ဗိုလ်လုပွဲ Push ကို
သို့သော် 10 မိနစ်နျြရစျ။ ယင်းခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာအငယ်, လတ်ဆတ်ကစားသမားထွက်ခွာ Tikhonov သည်သူ၏စစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံကြည်စိတ်ချရ။ Brooks ပင်ပန်းဆိုဗီယက်ခြေထောက်၏အားသာချက်ယူပြီး, အမြန်ဆိုင်းလေးလိုင်းများရှင်းပြီ။ "ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါဆိုဗီယက်ထိတ်လန့်ကိုငါမြင်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲ" ဟု Craig ကဆိုသည်။ "သူတို့ကပဲတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်, ရှေ့ဆက် puck ပစ်ခဲ့သည်။ "
ဆိုဗီယက်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းတာဝန်ခံတပ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းထုတ်လွှင့်အယ်လ် Michael အမေရိကန်အားကစားအတွက်အကျော်ကြားဆုံးခေါ်ဆိုခကိုအပ်။ "က Eleven စက္ကန့်ကိုသင်တစ်ဆယ်စက္ကန့်တယ်ခြင်း, နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအခုအချိန်မှာသွားဂိမ်းထဲမှာကျန်ရစ်ငါးစက္ကန့်ကိုသင်အံ့ဖွယ်အယုံကြည်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်။ !? ! "
အဆိုပါအဆောက်အဦဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး, Craig ကသူ၏အသင်းဖော်များကညီမတွေအကုန်လုံးခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်တိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ထိုအခါသင်းရှုံးနိမျ့ပင်ပြုံး, သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုလွှာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, လက်ခါ။ ဂျွန်ဆင်နဲ့အဲရစ် Strobel urinalysis အတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့စောင့်ဆိုင်းခန်းထဲမှာ Kharlamov နှင့် Mikhailov တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "Nice ဂိမ်း" Mikhailov ကဆိုသည်။
ဒါကသိသိသာသာအနိုင်ရ "။ ရေခဲပြင်ပေါ်အံ့ဖွယ်အ" လူအများစုကမှတ်မိကားအဘယ်သို့ဒါပေမယ့်နှစ်ခုဂိမ်းပြိုင်ပွဲများတွင်ကျန်ရစ်၏။ အမေရိကန်တွေဖင်လန်ဆန့်ကျင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ဆိုဗီယက်ဆွီဒင်ရှုံးနိမ့်လျှင်, ရုရှားနိုင်ငံနောက်တဖန်ရွှေအ medalists ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းချန်ပီယံ၏ရေးအဖွဲ့က USA ရဲ့စိတ်ဆိုး, တစ်ဦးစပ်စုသမ်မာအဖြစ်ကိုပိုမိုဘာမျှမဆင်းလိမ့်မယ်။
"မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကို စိုးရိမ်. ဒီဂိမ်းမတိုင်မီရှိခဲ့သည်" backup လုပ်ထားဂိုးသမားစတိဗ် Janaszak ကဆိုသည်။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းတာကတော့စိတ်ဓာတ်ကြောက်ရွံ့ Brooks "ကျနော်တို့က။ ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည် 10 နှစ်အကြာတွင်ထိုင်လျက်နဲ့ကျနော်တို့ဒါနီးစပ်လာမယ့်ပြီးနောက်ရွှေတံဆိပ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပုံကိုအံ့သြလိမ့်မယ်သောအတွေးတို့ကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့သည်" ဟုအဆိုပါနေ့ကဂိမ်းရှေ့မှာမခက်အလေ့အကျင့်ပွေးကဲ့ရဲ့ မိမိအကစားသမားတွေ: "သင်လည်းငယ်ရွယ်ပါပဲ။ သင်ဤအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ "
စောင့်ကြည့်အသစ်များကိုအမေရိကန်ဟော်ကီပရိတ်သတ်တွေသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူသူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကောင်းမွန်စွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ထင်ရှား။ , ဖင်လန်တစ်ဦးအစိုင်အခဲအဖွဲ့နှစ်ခုကာလပြီးနောက် 2-1 ခဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အတူတူသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ် 20 မီ, နည်းပြကသူ၏ကစားသမားသတိပေးခဲ့သည်: "ဒါကသင့်ရဲ့ဘဝတွေကို၏ကျန်သရဲခြောက်သောပါလိမ့်မယ်။ " ဒီအဖွဲ့ကအခြားအစွမ်းထက်တဲ့ finish ကိုအတူတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဖီးလ် Verchota, ရော့ McClanahan နှင့်ဂျွန်ဆင်တို့ကရည်မှန်းချက်များရွှေတံဆိပ်တံဆိပ်ခတ်။
သူ Mike Eruzione အဆိုပါတံဆိပ်စင်မြင့်ပေါ်မှာသူ့ကို join ရန်သူ၏အသင်းဖော်တောင်းဆိုအတူနောက်တော်သို့လိုက်သော pandemonium ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဟော်ကီက၎င်း၏ defining ယခုအချိန်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"! ဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာ" Michael တစ်လျော့နည်းအမှတ်ရစရာထုတ်လွှင့်လိုင်းထဲမှာဟစျကျွောလေ၏သူဟာတံဆိပ်အခမ်းအနားကာလအတွင်းပိုကောင်းကြောင့်ဖမ်း။ "။ အဘယ်သူမျှမဇာတ်ညွှန်းအစဉ်အဆက်ဝံ့"
1980 ခုနှစ်အိုလံပစ်ဟော်ကီ: ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတန်းစီဇယား
ဘယ်လိုအတော်များများမူကြမ်းရွေးချယ်မှုများဟာအကြောင်း NHL ဖို့ဒါဟာလုပ်ရမလား?
အဆိုပါဝိန်း Gretzky မှတ်တမ်းစာအုပ်
ဟော်ကီရဲ့ပထမဦးစွာသန်း-ဒေါ်လာစျေးက Man ဘယ်သူလဲခဲ့သလား
အများစုမှာ Stanley ဖလားရေးအဖွဲ့တို့ကဆွတ်ခူးရရှိ
NHL သမိုင်းတစ်လူပျို Player ကိုအားဖြင့်အမြင့်ဆုံး-အမှတ်ပေးဂိမ်းဆိုတာဘာလဲ
Stanley Cup Winners: အဆိုပါအပြီးအစီးများစာရင်း
အဆိုပါ Little ကဒရမ်သမား Boy ခရစ္စမတ်ကာရယ်လ် Be လာကိုဘယ်လို
မိန့်ခွန်းထဲမှာ Direct နှင့် Writing
NetBeans အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးရိုးရှင်းသောဂျာဗား User Interface coding နှင့် Swing
သင့်ရဲ့ကောလိပ်ရည်းစား9ဂရိတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အတောအတွင်း Secession ၏အမိန့်
(ချ, မြေ, မီးသတ်မှ) "Débarquer" Conjugate လုပ်နည်း
Multi-ဆုံးဖြတ်ချက် Delphi Applications ကိုများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဖာနန်ဒို Ortega အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပြစ်ကိလချမ်းမှ Mark Zuckerberg ဟာရဲ့အိမ်ထောင်ရေးလူမျိုးရေးမှတ်ချက်များထုတ်ဆောင်
လင်းယုန် Alignment ကိုခိုင်ခံ့စေ Run ကိုပံ့ပိုးမှုကနေထောင့် Blitz
"Comporter" (များ၏တသမတ်တည်း Include, Comprise မှ) Conjugate လုပ်နည်း
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူမာစတာကိုကူညီပါတစ်ခု, Conversation လမ်းညွှန် "နေကောင်းလား?"
40 နှစ်အောက်ခွလှေ 26 များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းကမ်းများ Boating
သို့တိုင် Effect7နယူးသဘောတူညီမှုရ Programs ကိုယနေ့တွင်
အဆိုပါအကျဉ်းသားများ '' အကျပ်ရိုက်မှု